Ukulungiswa ngokufanelekileyo nokuhamba kunye nokusukela kwirejista ukuya esikolweni
Khuthaza ngaphandle kokugqithisa - fumana umntwana wakho aqheleke kwiimfanelo ngaphambi kokuqala isikolo
Isihlandlo sokuqala esikolweni - qiniseka ukuba uphumle ngokwaneleyo
Xa uneminyaka emithandathu, ubunzima bokuqala bomi: abantwana basebenzise ukuva ezi ngcaciso okanye ezifanayo ngexesha elidlulileyo xa ubhaliso lusondela.
Ukususela kwi-kindergartner ukuya kumfundi-uguqulelo olusisigxina luphumelela
Kwiminyaka yakutshanje, iikholeji zezikolo eziprayimari zitshintshile ootitshala nabazinikeleyo ngoku bazama ukwenza kube lula kubantwana ukuba baqale isikolo ngokubandakanya amanqaku amaninzi eklasini kunye nokunciphisa ngamabomu ukwesaba. Intsebenziswano phakathi kweziko lokulisa kunye nesikolo saseprayimari uye waphucula kwiindawo ezininzi.
Nangona kunjalo, abantwana abaninzi basenkulumeni bazive baninzi ngaphezu kovuyo xa becinga indima yabo entsha njengesikolo esikolweni. Emva koko, esi sigaba esitsha sobomi sizisa ezininzi utshintsho olubalulekileyo kwaye, ngaphezu kwayo yonke imisebenzi.
Kanye kunye nootitshala, njengomzali kufuneka uzame ukwenza utshintsho phakathi kweso sontanga kunye nesikolo njengobumnandi kunokwenzeka kwaye ukulungiselela umntwana kakuhle ngemingeni emitsha.
Umehluko omkhulu phakathi kokunyusa esikolweni kunye neenkqubo zokufunda zesikolo kukuba umntwana esikolweni ngokukhawuleza unemisebenzi eninzi. Sekuvele sikwazi ukudlala, ukuhleka nokuhlaziya yonke imini kwaye ngokukhawuleza i-45 kufuneka ibe kwifowuni imizuzu embalwa ngelo xesha, ihlale igcina iincwadi zayo zilungele, yenza umsebenzi wesikolo kwaye zibhale iileta ezicocekileyo.
Oku kutshatyalaliswa kwabaninzi abatsha. Ngoko ke, kunengqiqo ukufundela abantwana sele sele babhalise kwiimfanelo. Oku akuthethi ukuba abantwana bafanele benze nantoni na ukubhala okanye ukubala kokusebenza imihla ngemihla. Kukho amanye amathuba.
Ukuqala kwesikolo njengesiqalo sokuphila kwesikolo
Umzekelo, ukuba umntwana wakho ufuna ukuya kwiqela le-gymnastics okanye kwisikolo somculo, kufuneka baqale bathathe inxaxheba kwisifundo sovavanyo esingabopheli. Emva koko ikwazi ukugqiba isigqibo sokuba ngaba enye inxaxheba iyakufaneleka okanye ayikho. Kodwa: Xa umntwana wakho sele egqibe isigqibo, kufuneka uhlale ngaloo ndlela-ingakumbi ukuba umrhumo wonyaka sele uhlawulwe.
Kwimeko yobomi bemihla ngemihla kukho iimeko kwiintsapho zonke apho umntwana onokufundela angakwazi ukuthatha imisebenzi ethile. Ngokomzekelo, kunika intombazana okanye unyana wakho umsebenzi wokuthwala udoti, ukuya ebhakabhakeni, okanye ukubeka itafile rhoqo. Le nto iya kubulala iintlobo ezininzi zeentaka ngelitye elinye, kuba umntwana wakho akavelanga nje ngomsebenzi womsebenzi kodwa uvakalelwa ngokunyanisekileyo. Ukongeza, ukuzithemba kwakhe kuyaqina.
Ukongezelela, soloko ukhuthaza umntwana wakho ukuba acinge, abukele kwaye aphulaphule. Yintoni owathetha ngayo ootitshala malunga nohambo? Ziziphi iimpahla ezifunekayo ukwenzela ukusebenza kwindibano yehlobo? Ziziphi iindlela ongabonwa ngumntwana wakho ukulungisa iingxabano phakathi kwezinto ezimbini ezilungileyo?
Ngokwenza njalo, ukhuthaza nokukwazi ukugxila kwaye ucinge ngendlela ejongene nesisombululo. Ezi zixhobo zibini zifuneka ngokukhawuleza ngabafundi, njengoko oku kuququzelela iinkqubo zokufunda.
Kwakhona kubalulekile: Makhethe umntwana wakho azame kangako kwaye akhuthaze ukuzimela kwakhe. Ngokomzekelo, xa kuziwa esikolweni, kufuneka ukwazi ukugqoka yedwa, uzinze ngokwawo, kwaye unakekele izinto zawo.
Ngokukodwa iiveki zokuqala njengesikolo esikolweni kubaluleke kakhulu abantwana. Akukuphela nje ukuba ufunde ukufunda, kufuneka ufumane indlela yakho malunga nesakhiwo esingaziwayo, ujonge indlela eya esikolweni uze uthathe indawo yakho kwinqanaba leklasi. Umsebenzi wasekhaya usemini.
Ukuqala kwesikolo kufuneka kuhambisane nabazali
Ngeli xesha, njengomama okanye utata, kufuneka uqiniseke ukuba umntwana wakho ulala ngokwaneleyo kwaye unokufumana ixesha lokubuyela emini. V
Zama ukugcina inani lokumiswa kwemini emva kwexesha elide ukwenzela ukuba unyana wakho okanye intombi yakho ikwazi ukuhlangabezana nabahlobo okanye ukuhlala phantsi kwigumbi labo.
Ungafaki uxinzelelo kumntwana wakho ukuba kunzima ukuhlangabezana neemfuno zemfundo. Abaninzi bokuqala abaqhubi bancintisana omnye nomnye ukuze badumise ovela kutitshala baze bazibeke bebephantsi kwengxaki. Khuthaza umntwana wakho ukuba ancede ngemisebenzi yakhe yasekhaya, kodwa bamkele xa benqabile uncedo lwakho.
Kubalulekile: ukuba umntwana wakho wenza iimpazamo, ungazilungisi. Ngaphandle koko, ootitshala baya kubeka kakubi inqanaba lomsebenzi womntwanakho, kwaye iziphumo ziya kuphazamiseka kwiimvavanyo zokuqala.
Ukuba uqaphela ukuba umntwana wakho uyagxininiswa, jonga ingxoxo kunye notitshala weklasi. Abaqeshisi bokuqala akufanele bachithe ngaphezu kwe-30 kumzuzu we-40 emsebenzini wabo wesikolo.
I-Kindergarten & School - Ukunyuswa kwabantwana abaselula
Ukuvuselela ukusuka kwigumbi lokuhlala
Kutheni sifumana unxanwa kwindawo? abantwana umbuzo
Iflegi yeThadi - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yeVatican - Iiflegi zamazwe onke
Iilwimi zentlobo ezimbini
Isipho sokufumana uTitshala kwi-kindergarten